Isakhiwo | Tourism-Spot.com
February 23, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	The Great Belt Fixed Link kungenye yezindlela ezingcono kakhulu ukumiswa amabhuloho ukuthi ungathola Denmark. Lokhu bridge amazing, okuyinto owaziwa kahle njengoba Vestbroen Bridge, owadalwa Dissing + Weitling ukuze awele ibhande Omkhulu Straight. Ngamanye amazwi, it uzokwazi ukuxhuma Danish Island of Zealand kanye Funen. Ngakho
February 21, 2017	tourismspot	Shiya amazwana	Ebheka ezindala Edinburgh, uzokwazi ukuthi ungathola eziningi ezikhangayo ukuthi ungavakashela khona. Omunye wabo Close uMariya WeNkosi, isakhiwo odumile e Edinburgh ukuthi inenani zomlando. Lesi sakhiwo siqanjwe uMariya King, indodakazi ka-Alexander King ngubani odumile ukuba ezinye izindawo ezibalulekile azungeze